Shir looga arrinsanayo samaynta santuukh kayd dhaqaale oo uu yeesho gobolka Nugaal oo maanta Garowe lagu qabtay. – Radio Daljir
Garowe, Oct 03 ? Waxaa maanta xarunta maamulka gobolka ee magaalada Garowe lagu qabtay shir ballaaran oo looga arrinsanayey samaynta santuukh-dhaqaale oo uu yeesho gobolka Nugaal, kaasoo lagu maarayn doono dhibaatooyinka gobolka la soo gudboonaada gaar ahaan masiibooyinka rabbaaniga ah.
Kulankaan oo uu soo qaban-qaabiyey maamulka gobolka Nugaal ayaa waxaa ka soo qaybgalay mas?uuliyiin kala duwan oo ka tirsan hay?adda dawladda Puntland sida xukuumadda iyo baarlamaanka, waxaana sidoo kale kulanka ka qaybgalayey mas?uuliyiinta heer gobol yo mid degmo ee gobolka Nugaal, aqoonyahanno iyo ururrada bulshada ee ka hawlgala gobolka.
Shirkaasi maanta waxaa si weyn loogu faaqiday habboonaanta iyo lagama maarmaannimada in la sameeyo saltuukh-dhaqaale oo wax looga qaban karo haddii ay yimaadeen masiibooyin rabbaani ah sida abaaro, daadad iyo duufaan inta, iyo sidoo kale baahiyaha mugga leh ee asaasiga ah, waxaana la guddoonsaday qaadista taallaabadaasi oo la isla garawsaday in ay tahay mid ahmiyad weyn u leh bulshada gobolka.
Wasiirka arrimaha gudaha dawladda Gen. C/llaahi Axmed Jaamac ?Ilka-jiir? oo ka mid ah madaxdii dawladda ee kulanka maanta ka qaybgalay ayaa ku dheeraaday muhiimadda samaynta santuukhaani uu leeyahay, waxaana uu ganacsatada ku dhaliilay fir-fircooni la?aanta ka haysta xagga danaha guud ee bulshada, isagoo soo jeediyey in loo guntada ka qaybqaadashada suntuukha dhibaato dhawrka ah ee gobolka loogu talo galay.
Dhinaca kale guddoomiyaha gobolka Mudug Cabdi Xirsi Cali ?Qarjab? oo iskana ka mid ahaa mas?uuliyiintii madasha ka hadalay ayaa sheegay kuna celceliyey wax-ku-oolnimada santuukhaasi uu leeyahay, waxaana uu dadweynaha ka dalbaday in ay kaalin weyn ka ciyaaraan samaysiga kayd dhaqaale oo danahooda lagu hormariyo.
Kulanka lagu samaynay santuukha dhawrtada dhaqaale ayaa ka dambeeyey kaddib markii muddooyinkii ugu dambeeyey maamulka gobolka iyo xafiiska hormarinta gobolkuba ay ku hawllanaayeen qorshayaal lagu dardar-galinayo danaha guud ee gobolka.